မြောက်အမေရိကလေကြောင်း - Rikoooo
alpha သည် T-28 Trojan တွေသတ်မှတ်မည် FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 9.2 ကို MB
ကို T-28 Trojan ဟာ 1949 ပြီးနောက်အမေရိကန်ရေတပ်ကအသုံးပြုမယ့်လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းသည်။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာ T-34 ဆရာဖြင့်အစားထိုးသည်။ ဒါဟာလေယာဉ်တစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်။ (FSX & P3D တစ်သဟဇာတဗားရှင်းအခမဲ့ယခုယခင် payware ပေမယ့်) ကဒီမှာတစ်ဦးကအံ့သြစရာအတွက် add-on ဇာတိ FS2004 များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ! ကိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, တစ်ဦး VC ကို w ပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
မြောက်အမေရိက Rockwell OV-10A Broncos V2 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:4882
Size: 17.2 ကို MB
ဗားရှင်း FSX ဖြည့်ညှင်းခြင်းမရှိဘဲကြိုးစားကြဖို့စူပါအံ့ဩ hereAgain ကိုကလစ်နှိပ်ပါဒီမှာကောင်းမွန်စွာပြုကြတဲ့အလုပ်ပါ! ဒီမှာအကြီးအအနုပညာဖြစ်ပါသည်, ဤနေရာတွင်တိ Conrad.BMP HD ကို 1024X1024 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အရည်အသွေးမြင့်ကို virtual cockpit နဲ့နှိပ်ဖွင့်, ဇာတိ FS2004 ငါး repaints သုံးယောက် 1D မော်ဒယ်နှင့်အတူ SP3 update ကို pack.Include နှင့်အတူထည့်သွင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
မြောက်အမေရိကက F-86 EF SABRE + SP1 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 15 423
Size: 56.1 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတဗားရှင်းကလစ် hereThis add-on ကိုမူလက FS2004.Here များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်မြောက်အမေရိကက F-86 E / F ဖုံးကိုဓားရှည် + SP1 update ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝ 3D cockpit နဲ့ဓာတ်ပုံကို-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့လေယာဉ်ပျံ, အသံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြပြီးမော်ဒယ်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဤသည်အတွက် add-on ကိုအလွယ်တကူတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
မြောက်အမေရိကသည် T-39 Sabreliner FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 12.5 ကို MB
ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂျက်လေယာဉ်။ ထိနျးခြုပျဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့နဲ့ရိုးရိုး။4repaints အတွက်ရရှိနိုင်။ aircraft.The မြောက်အမေရိက Sabreliner (နောက်ပိုင်း Rockwell Sabreliner) ၏ဒီ type များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးအသံမြောက်အမေရိကလေကြောင်းကတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ res ရှိအမေရိကန်လေတပ်မှအဆိုပြုထားခဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ သူ Mike ကျောက်စာ
Bombardier မြောက်အမေရိက B25J RAF FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 14 925
Size: 42.8 ကို MB
B25J RAF ဗားရှင်း Bombardier ။ လူမီနီယမ် livery လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်ခု repaints အတွက်ရရှိနိုင်။ အများစုကရွေးချယ်စရာ။ စုံလင်သောအသံသည်: ကမှနားမထောငျနှင့်အိပ်မက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာ! ဒီအောင်များအတွက်စာရေးသူမှကျေးဇူးတင်ပါသည် add-on FS2004 ဘို့-ရှိရမည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဘရိုင်ယန်ညှိုးနွမ်း, ရွိုင်း Chaffin